Candy manorotoro Level 410 Cheats and Tips - Lalao famoronana Candy - Free Lives Tips Cheats Hints
You are here: Home / Famoronana Candy / Candy manorotoro Level 410 Cheats and Tips
Last updated on Aogositra 10, 2021 By Isobella Franks Leave a Comment
Ny ambaratonga fahasarotana Candy dia zava-tsarotra tsy ny rehetra no mifaly. Fa ho an'izay manao izany, azontsika antoka fa be ny ambaratonga izay ahafahan'izy ireo manana izany fahafinaretana izany. Na dia misy rivo-piainana henjana sy henjana manodidina ny ambaratonga miaraka aminy amin'ny fiantsoana sy akora tsy nahy, manindrona ny Smartphone ary mandinika azy aoriana kely noho ny fahavoazana, mbola azon'izy ireo an-tapitrisany maro. Mba hamahana ny ambaratonga toy izany, asehontsika ny haavon'ny Candy Crush 410 Cheats and Tips.
Jellies dia fahavalon'ny rehetra amin'ny mpilalao Candy Crush. Antsoina hoe jellies, frosting, sy ny zavatra maro hafa, ampidirina foana ao amin'ny tanjon'ny ambaratonga raha misy izy ireo. Ny maharatsy azy aza dia ny fisehon'ny ambaratonga dia manana zoro tsy azo fehezana ary sakana hafa izay mitazona ny zavatra mahaliana '.
Ny tanjon'ny haavony 410 dia tsotra no aseho. Esory daholo ny rehetra 70 jellies sy score 150,000 hevitra; izany rehetra izany ao 50 moves. Na dia avo be aza ny isan'ny fihetsehana, misy baomba miaraka 30 manetsika sisin-dàlana sy mpamorona sôkôla any ambaniny izay mahatonga an'io sehatra toa mahafinaritra io fa tsy tiana ho alina.
Candy manorotoro Level 410 Cheats and Tips:
Tsy mila mierona, rehefa atsipy mihemotra izany isika. Araho ireto torohevitra sy trosa tsotra ireto mba hamafana ny haavo, ary aza matahotra ny hanandrana vitsivitsy. Manana lesona betsaka koa isika avy amin'ny tsy fahombiazantsika. Noho izany, tsy mila ado intsony, aleo hidira:
Zavatra voalohany, miambena maso amin'ny fihetsehana amin'ny farany ambany fa tsy ny tampony. Tsy izany ihany no ahafahanao manapa-kevitra tsara kokoa fa mamela anao hanao candies manokana izay ho hitanao, dia fananana amin'ity haavo ity.
Hianareo ihany no 30 mihetsika alohan'ny hipoahan'ny baomba, ka sao marimao ny manafoana azy ireo aloha. Afaka miampita ireo vatomamy tsy tapaka ianao isaky ny azo atao, na azonao atao ny manisy vatomamy manokana ho enti-manala vatomamy sy jélies marobe.
Ny safidy tsara indrindra nataonao dia ny fanaovana fitambarana telo mikoriana mba hisy fiantraikany farany, tafiditra amin'izany ny fiampitana baomba loko misy vatomamy misy kofehy na voafehy, miampita baomba misy loko roa miaraka, na miampita vatomamy misy kodiarana misy vatomamy voafehy. Io dia ahafahanao mitondra jellies be dia be miaraka amin'ny baomba izay sarotra amin'ny zotra.
Aza adino fa ny mpanao sôkôla any ambany aty? tsara, dia hitazona hatrany ny fanaovana sôkôla mandritra ny ambaratonga. Aza adino ny mitandrina ny sôkôla mitsangana tsindraindray na izany dia hanjary tsy ho voafehy ary hanahirana ny hamorona vatomamy manokana. Izy io dia afaka mitelina vatomamy manokana, manipy anao tanteraka ny lalana.
Farany, ho an'ireo mafy dia mety ho tonga zorony, ny safidy tsara indrindra ataonao dia ny mamorona sy mampiasa vatomamy manokana amin'ny fampifangaroana ny moka amin'ny gony amin'ireny toerana ireny. Ireo mpilalao dia matetika afaka mamono ny ambaratonga manontolo fa mivelatra noho ny jellies eo amin'ny zoro.
Izy ity dia momba ny fikarakarana tsara ny hetsikao ary miandry ny fiantraikan'ireo hetsika ireo manodidina. Hahita anareo manaraka amin'ny manaraka; mandra-pahatongan'izany, mijanona mamy!!!